ana orinasa manana tsenan’asa tao na “sous-traitans” EPI, raha ny fikaroham-baovao, ka ny taona 2012 no tonga tao Ambatovy. Naiditra tao amin’ny toeram-pitsaboana ISOS ao amin’ny faritry ny ozinina ihany ny tenany 11 mey lasa teo rehefa nahiana ho tratry ny covid-19. Voamarina fa voa taorian’ny fitiliana natao taoriana kelin’ny nidirany tao amin’ny toeram-pitsaboana. Nihanarefo hatrany, ka izao tsy tana izao ny ainy. Efa hitantsika rehetra ny fandravaravan’ity aretina ity manerana izao tontolo izao, ary efa maro tamin’ireo olona akaiky antsika no efa voany, hoy ny hafatra nataon’ny ekipa ara-pitantanana ny orinasa. Naneho fiaraha-miory ho an’ny namana sy tapaka sy ny fianankaviamben’Ambatovy ny ekipan’ny Fitantana ny orinasa omaly hariva ihany. Nanamafy fa tena azon’ny rehetra ao Ambatovy tsapain-tànana ny maha tena zava-doza ity aretina ity, ary porofo mivaingana amin’izany izao fahalasan’ny mpiara-miasa izao. Ity izany no olona faharoa matin’ny coronavirus teto Madagasikara taorian’ilay lehilahy 59 taona tao Toamasina ny 17 mey lasa teo. Andrasana anefa ny fanambarana ofisialy ataon’ny manam-pahefana.